Mandalay – Department of Medical Service
Posted on November 19, 2019 by Editor 1
မန္တလေးမြို့၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၁၈) ရက် ကမ္ဘာ့ပဋိဇီ၀ဆေးဆိုင်ရာ အသိပေးရက်သတ္တပတ် (WAAW) အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် မန္တလေးမြို့ရှိ Hotel Sakura Princess တွင်ကျင်းပရာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် (ဓာတ်ခွဲ) ပါမောက္ခဒေါက်တာဌေးဌေးတင်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး/ကုသရေးဦးစီးဌာနမှူး... Read More | Share it now!
Posted on May 28, 2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location) ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ (က) ဖုန်းနံပါတ် – ၀၆၆-၂၀၂၁၀၁၅ (ခ) ဖက်စ်နံပါတ် – ၀၆၆-၂၀၂၁၀၁၅ (ဂ) ပြင်ပလူနာဖုန်းနံပါတ် – ၀၉-၇၉၂၅၁၇၄၀၆ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ဖျားနာကုသဆောင် အရိုးကုသဆောင် ခွဲစိတ်ကုသဆောင် ကလေးကုသဆောင် သားဖွားမီးယပ် ကုသဆောင် မျက်စိကုသဆောင် သွားဌာန အကြော၊အဆစ်နှင့်ပြန်လည်သန်စွမ်းရေးဌာန ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄.၁) General OPD Timetable အရေးပေါ်နှင့်ပြင်ပလူနာဌာနကို (၂၄)နာရီ ပိတ်ရက်မရှိကုသမှုပေးပါသည်။ (၄.၂) Specialist OPD Timetable ကြည့်ရှုချိန် – နံနက် (၉)နာရီမှ... Read More | Share it now!
Posted on May 23, 2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) မြစ်ငယ်၊ထုံးဘိုလမ်းခွဲ၊တောတွင်ကျေးရွာအနီး၊စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီး၊အမရပူရမြို့နယ်၊ မန္တလေးမြို့။ ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့် လိပ်စာ စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီး -၀၉-၂၆၆၈၆၃၂၅၈ မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါကုဆေးရုံ -၀၉-၇၈၀၇၉၃၈၃၁ Email Address -Mental health 883@g mail.com ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ – (က)စိတ်ကျန်းမာရေးကုသဌာန (ခ)မူးယစ်ဆေးစွဲရောဂါကုသဌာန ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (က)မန္တလေးမြို့၊စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးရုံကြီးတွင် ရုံးဖွင့်ရက် နံနက်(၈:၃၀) မှ... Read More | Share it now!
Posted on April 25, 2019 by Author 2
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ ရွှေစည်းခုံရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးကားလမ်းမကြီးဘေး ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ – ဖုန်းနံပါတ် = ၀၆၄-၄၀၄၆၉ – Fax No. = ၀၆၄-၄၀၄၆၉ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) (၃-၁)အထွေထွေရောဂါကုသဆောင်(ဖျားနာလူနာဆောင်) (၃-၂)ခွဲစိတ်ကုသလူနာဆောင် (၃-၃) အရိုးနှင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာကုသဆောင် (၃-၄) သားဖွားနှင့်မီးယပ်လူနာဆောင် (၃-၅) ကလေးလူနာကုသဆောင် (၃-၆)ပြင်ပလူနာဌာန ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄.၁) General OPD Timetable အစိုးရရုံးဖွင့်ရက်များ(နံနက် ၉:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၄:၀၀နာရီထိ) (၄.၂) Specialist OPD Timetable... Read More | Share it now!
၁။ ဆေးရုံတည်ရှိရာနေရာ ( Location ) နှင့်ဓါတ်ပုံ ရေနံ့သာအနာကြီးရောဂါအထူးကုဆေးရုံ၊ ရေနံ့သာကျေးရွာအုပ်စု၊ ဥက္ကံကျေးရွာအနီး၊ မတ္တရာမြို့နယ်၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၂။ ဆက်သွယ်ရမည့်လိပ်စာ (၂-၁) ဖုန်းနံပါတ်များ ရုံးခန်း – ၀၉-၈၉၆၅၀၂၅၈၃ ဂျူတီခန်း – ၀၉-၇၈၆၄၁၅၈၈၇ ဆေးလူမှုဆက်ဆံရေးဌာန – ၀၉-၇၉၈၇၂၅၄၀၈ (၂-၂) Fax No , Official E mail address – မရှိပါ။ ၃။ ဆေးကုသမှုပေးနိုင်သောဌာနများ ( General / Speciality Units ) – ပြင်ပ လူနာ ဌာန – အတွင်း လူနာ ဌာန ၄။ ပြင်ပလူနာပြသနိုင်သောအချိန်များ (၄.၁) General OPD Timetable –... Read More | Share it now!
Developed by Dr Nay Win Aung